« prev 1 … 858 859 860 861 862 … 894 next »
Sagal Radio Services • News Report • November 27, 2012
Khaatumo State oo sii daysay xubno ka mid ah Xisbiga Xaqsoor ee Somaliland
Maamulka Khaatumo State of Somalia, ayaa sii daayay xubno ka mid ahaa xisbiga Xaqsoor ee ka jira deegaannada maamulka Somaliland, kuwaas oo shalay galinkii dambe lagu qabtay degmada Xuddun ee gobolka Sool.
Ciidamo AMISOM iyo Soomaali isugu jira oo tababar uga furmay Balad-weyne
Saraakiisha maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa AMISOM ee Hiiraan jooga, ayaa sheegaya in illaa 250 askari oo ka kala tirsan Jabuutiyaan AMISOM qeyb ka ah iyo kuwa Soomaali ah uu tababar maanta uga furmay magaalada Balad-weyne.
Raysal wasaare Saacid oo Muqdisho ku qaabilay wafdi ka socda Midowga Yurub
Raysal wasaaraha Soomaaliya Md. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Michel Carves Deurso, oo booqasho ku tagay Xamar.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqanaya Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa safar toddobaad qaadan doona waxa uu maanta uga bilowday dalka Jamhuurriyadda Jabuuti, iyadoo dalal kalena uu sidoo kale madaxweynuhu booqan doono.
Fiqi "Cuna-qabateynta hubka saameyn wayn bey nagu leedahay"
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Md. C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, ayaa sheegay in cuna-qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya saameyn weyn ku leedahay howlaha ciidamada.